Zisho ukuthini izici zezinkanyezi? - Izici
Imibuzo Nezimpendulo Ezinhle Kakhulu - Izici Zokufundwa Kwezinkanyezi
Ku-ukufundwa kwezinkanyezi, iisicii-engeli amaplanethiyenzakomunye nomunye kuizinkanyezi, futhi nakwezokukhuphuka, maphakathi nezulu, inzalo, amazulu aphansi, namanye amaphuzu weukufundwa kwezinkanyeziinzalo. Ngokuqondile iisici, okunamandla noma okuvelele kakhulu kuthiwa kusekulolongeni uhlamvu noma ekuboniseni ushintsho.
Wonke umuntu uwuzwile lo mbuzo wakudala ukuthi luyini uphawu lwakho lwe-zodiac lapho abantu bethi kukholakala ukuthi kusho isibonakaliso sendodana yomuntu, okuyinto eyenzeka kubantu abaningi abazi ngokufundwa kwezinkanyezi. Izimpawu zelanga ziyisici esilula sokufundwa kwezinkanyezi, ziphathelene kuphela nokuma kwelanga lapho umuntu ezalwa, yize ukufundwa kwezinkanyezi kuyinkimbinkimbi kakhulu njengoba amaplanethi ahlukene asho izinto ezihlukile ebuntwini Izimpawu zeLanga zinikeza incazelo eyisisekelo ngaye uqobo nobuyena Izimpawu zelanga eziyi-12, ezaziwa nangokuthi i-zodiac, yi-Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricorn Aquarius kanye nePisces Aries Aries Aries inentshiseko enkulu futhi inamandla, kepha ngaphansi kwethemba lakhe lemvelo nakho kungaba ukuphepha ngenxa yentando yabo yokuphumelela. Bangama-daredevils abanesidingo sokuzidela nokuzimela, kepha kungenxa yokubekezelela okuphansi kweLange ngenkathi ukuthukuthela kuthola imizwa engacabangi futhi enobugovu ngabaholi abakhulu iTaurus iBull Taurus ngabantu abathembeke kunabo bonke ozohlangana nabo Banesineke, bayaphikelela, banomusa , futhi babe nohlangothi lwamaRoma tic, kepha bavame ukuba nenkani ngokweqile futhi babe ngamavila ngandlela thile, yize izinkambo ziba abangani abahle futhi ngokuqinisekile zizobavikela labo ababathandayo iGemini amawele amaGemini bahlakaniphe kakhulu futhi bahlakaniphile bayamangalisa, bayathandeka futhi badlala ngothando ngokwemvelo iGemini ziyacabanga, kepha futhi zikha phezulu ngoba zingaba kude ngokwasemoyeni futhi zibe nobuqili obuncane, ukuvalwa okubili kususelwa esifisweni sabo sokujabulisa wonke umuntu, yize amawele kungabantu abathandekayo abanentshiseko enkulu abazohlala benesikhathi esihle nomaphi lapho beya khona I-Cancer Cancer ibucayi kakhulu ithembekile, inokwethenjelwa futhi iyazigqoka njengabangane nemindeni yabo ikuvikela ngokweqile kö Bangaba ffectionate, nazo zivame ukuba nezimo.
Umdlavuza wokuzidabukela nokuzidabukela ungesinye sezibonakaliso okunzima kakhulu ukusiqonda, kepha ngokujwayelekile zingesinye sezibonakaliso zobungane ezihle kakhulu uLeo the Leo, uLeo unesibindi, uyavelela futhi uyakhuthaza, bayazi ukuthi bafunani nokuthi bafuna nini banesandla esivulekile futhi bayazethemba, yize ngezinye izikhathi bezinyeza kakhulu, ukuzethemba kwabo kungaholela ekutheni bazikhukhumeze futhi bajabule kakhulu, yize bezimele, bakhetha ababukeli ababathandayo, ngenxa yalokho ubungane obujabulisayo nemvelo yabo evulekile yomphakathi. IVirgo Virgo iyacubungula ngenkuthalo futhi iyaqapha, kepha ngenkathi inokwethenjelwa kakhulu futhi inembile emsebenzini wayo I-Virgos ingahle ikhethe futhi ingaguquguquki kunezinye zezimpawu ze-zodiac ezigcinwe kakhulu iVirgo nayo ingabanda futhi ibe nokungabaza, kepha uma usukhona Bangabangane abahle ongabethemba futhi ubabuze izeluleko. ILibra i-libras yokulinganisela inokuthula futhi ivila kancane, izwana njengabantu abanemfudumalo nabanobungane, ukuthanda kwabo ukudlala izinto futhi bekwazi ukubona zonke izinhlangothi zengxabano, kepha lokho akubenzi ukuba bangabi esinye sezimpawu zezinkanyezi ezinganqikazi izimpawu ze-zodiac eziphumulele kakhulu lapho o ne-Scorpio Scorpio zizimele kakhulu, zifuna isikhundla, ziyafisa futhi zinamasu amaningi, yize ama-Scorpios amaningi engaguquki emvelweni, empeleni angama-Scorpios anemizwa kakhulu futhi aphethe, okuholela ekuthambekeleni njalo nasekhwele, futhi kungaba nokuthula kakhulu nokukhohlisa ekugcineni kosuku, kepha amaScorpios athembeke kakhulu futhi athembekile, ngakho-ke ungesabi ukubatshela umcibisheli oyimfihlo, njengoba esinye sezibonakaliso zeSagittarius zodiac ezinamandla zinamandla ngazo futhi zinethemba Ubuntu buhlala bulungele isikhathi esihleUzimele kakhulu futhi uthanda ukwazi iSagittarius entsha ayishintshi kakhulu futhi ayinakho okokuzwela kunokuba ugqoke imizwa enengqondo ngokweqile, yize bangaba budedengu uSagittarius wenza ubungani ngokuzidela kwabo kanye nobuhlakani babo jikelele ICapricorn imbuzi uCapricorn banesibopho esikhulu Bayasiza ngokuzimela futhi bayathakazelisa, kepha ngenxa yesimo sabo sokusebenza kanzima bathanda inganekwane ngenxa yesimo sabo sokusebenza kanzima nabo bangaba nenkani kancane futhi kwesinye isikhathi ukudangala, kepha lokho kubenza bahleleke kakhulu futhi babe nesikhathi esihle ekuphatheni isikhathi Wonke amaCapricorn ayabukeka kakhulu, ayanakekela futhi anomqondo oyingqayizivele wenhloso yamahlaya u-Aquarius ophethe amanzi u-Aquarius angongqondongqondo abaqhubekayo Bamele ushintsho nemibono u-Aquarius ahlekise ngayo ngokubhuqa, ngakho-ke bahlala benamahlaya okufanele bawasho.
Bangaba ngabahlubuki, baphikelele, baqhelelene ngokomzwelo futhi bashaywe ngesibhakela njengoba bezama njalo ukwehluka. U-Aquarius uqhutshwa ngokwengqondo, kepha uma kwenzeka udinga usizo noma umuntu ohlela uzungu, shayela i-Aquarius Pisces amaPisces Pisces angabambelela kakhulu, bahlala bedinga umuntu ozobagcina phansi okusho nje ukuthi bazibophezele kakhulu ukusiza abangani bakaPisces enembile kakhulu, enamasu futhi eguquguqukayo, bayayithanda i-adventure, ngakho-ke ubungani bakho namaPisces ngokuqinisekile buzogcwaliseka manje njengoba uzazi izici zesibonakaliso ngasinye se-zodiac. Luthini uphawu lwakho lwezinkanyezi? Izimpendulo zakho ngezansi, uma ngabe uyithandile le ndatshana, landela iTumblr yethu Twitter kanye ne-Facebook ngokuqukethwe okuningi futhi ungakhohlwa ukubhalisa
Yiziphi izici ezibuthakathaka ekufundweni kwezinkanyezi?
Ngokwesibonelo,isici se-trine lapho amaplanethi amabili ahlukaniswe ngama-degree angama-128uthathwe njengobuthakathaka. Lokhu kungenxa yokuthi i-trine ephelele ingama-degree ayi-120 ncamashi. Ngalesi sibonelo i-orb ingama-degree ayi-8. Lokho kungabizwa ngokuthi i-orb ebanzi, noma isici esibuthakathaka.
Zisho ukuthini lezi zici?
ibizo. ukubukeka kweso noma kwengqondo; bheka: okwenyamaisiciyezwe. imvelo; ikhwalithi; uhlamvu: okukha phezuluisiciyesimo. indlela into engabukwa noma ibhekwe ngayo; ukuhumusha; buka: bobabiliiziciyesinqumo.
EsiNgisini sinezikhathi ezihlukene eziyi-12 futhi uma ubheka leli shadi kungabonakala kukhungathekisa ekuqaleni ngoba kufanele ulifunde kanjani? Futhi umuntu kufanele akuqonde kanjani? Yebo, singahlukanisa lolu lwazi ngokunembile. Ngakho-ke esikhundleni sokuthi sithi sinenkathi eyi-12, singasebenzisa igama elithi 'inkathi' ngokunembile ukusho ukuthi empeleni sinezikhathi ezintathu nezici ezine. Uma siwahlanganisa sithola ishumi nambili elihlukile ...
Izikhathi ngicabanga ukuthi nawe ungazibala, kepha izindlela eziyishumi nambili zokusebenzisa isenzo noma isenzo. Ngakho-ke ake siqale ngezikhathi. Sinezikhathi ezintathu.
Sinezinto ezedlule (okwenzekile ngaphambili), sinesikhathi samanje (okwenzekayo manje noma kumzuzu 'wamanje' - noma ngabe kusho ukuthini lokho), futhi sinekusasa (okwenzeka kamuva). Ungakufunda lokhu ngokuqonde ngqo phezulu, ngakho-ke zonke lezi zenzo zenzeka lapha manje. Ngiyagijima, ngigijime, ngigijime, ngigijime, futhi uyabona ukuthi akwenzeki ncamashi kulezi ezimbili ezedlule njengamanje.
Ngomzuzu 'manje' sisho okuthile okuxegiselwe ngokwanele futhi kwandiswe kahle. Ngikunikeze isenzo esijwayelekile lapha ku 'ngihamba' futhi wonke ama-theorange ahlobene nalesi senzo, kepha ngabuye ngakuveza ukuthi kunezenzo ezingajwayelekile futhi. Lokhu kuguquka ngezindlela ezihlukile.
Ukwenza isibonelo, 'Bengicula' yisikhathi esidlule sokuthi 'Ngiyacula'. Futhi angisihlanganisanga ngokugcwele isenzo esiphuzi (isenzo esingajwayelekile) lapha, kepha ngicabanga ukuthi ungadlula kuso usebenzise iphethini efanayo nokuthi 'ngihamba' bese ubona ukuthi singafana noma sehluke kanjani ku'I ' ngicule ',' Ngiyacula 'njalonjalo. Kulungile, lokho 'kushubile', kepha futhi singakhuluma nge 'factor'.
Njengoba kushiwo, sinezici ezine ezihlukene, futhi igama elithi 'isici' livame ukudala inkinga kubantu. Ngoba kusho ukuthini ngempela? Yebo, ngikuchazele i-'Aspect 'yakho lapha ukukhombisa ukuthi isenzo sihlobene nesikhathi noma ukuthi sanda kanjani ngokuhamba kwesikhathi. Ake sibone ukuthi singaziqonda ngokushesha yini izici ezine ezihlukene.
Isici esilula siphathelene nesenzo esisanda kwenzeka. Singadweba umcibisholo lapha ukuthi kuvele kwenzeka ngesikhathi esithile. Kepha asicacisanga kakhulu ukuthi kwenzeka nini.
Ngempela, hlobo luni olungajwayelekile ngalokhu okulula lapha (ungasho futhi nesipho esilula, ngendlela, kepha sithambekele ukusifunda kusuka phezulu kuye phansi - ngakho-ke kuqala kuqala bese kuba yingxenye) kepha uma ukhuluma sesikhathi samanje lapha ('ngihamba'), ngabe awusho ukuthi ukube ubukhuluma kuphela ngalokhu okuphindayo.
Empeleni ubungathi, 'Ngiyahamba.' Lokhu kwenzeka njengamanje. Awusho, 'Ngiyahamba.' Into exakile ngesici esilula ukuthi imvamisa ayinasikhathi.
Kuyinto engenzeka ngokuhamba kwesikhathi, noma ongayisebenzisa ukukhuluma ngezenzo eziphindaphindayo noma ezejwayelekile. Ngakho-ke ungathi, 'Ngiya esikoleni nsuku zonke' futhi leso yisenzo osiphinda kaninginingi. Ngakho-ke isici esilula asilula kangako.
Kubhekisa esenzweni esisanda kwenzeka, kepha kunokuguquguquka okuncane ngokwesikhathi saso futhi asicacisanga ngokwenzekayo lapha. Kulungile, isenzo esiqhubekayo isenzo esenzeka isikhathi esithile, ngakho-ke isenzo esiqhubekayo noma esiqhubekayo. Ihlukaniswe ngokweqiniso ngokwengxenye yamanje ephela ngo -ing, bese sinezenzi ezisizayo zokuhamba nayo.
Ukubamba iqhaza kwamanje kunalo mqondo wokuqhubeka. 'Hamba' - akusho ukuthi kwenzeke ngaleso sikhathi. Kuyinqubo.
Isici noma isici esiqhubekayo noma esiqhubekayo sikhombisa umuzwa wokuthi kukhona okwenzekayo isikhathi esithile. Qaphela ukuthi inkathi edlule lapha (ukuqhubeka okwedlule) kubhekiselwa kuyo njengesikhathi esingaphelele kwezinye izilimi. Isibonelo, uma ufunda isiFulentshi, inguqulo yokugcina lapha ingabizwa ingaphelele.
Yilokho ukufana ongakubheka. Ukuphelela kuyinto eyenzeka esikhathini esedlule futhi esekufeziwe. Kuyinto eseqediwe futhi ngandlela thile inephuzu lokugcina.
Akufanele ngisho esikhathini esedlule ngoba kungenzeka manje noma ngokuzayo. Ngakho-ke isenzo esizimele esenzeka ngezikhathi ezahlukahlukene. Ungathi 'ngigijime', 'ngigijime' noma 'ngizobaleka'.
Futhi-ke okuqhubekayo okuphelele - okwokugcina - kunguhlobo oluthile lokuhlanganiswa kwalezi ezimbili ezedlule. Ungakucabanga lokhu njengohlobo oluthile lwesenzo esiqhubekayo esinendawo yokugcina. 'Ngihambile' 'ukugijima' isenzo esiqhubekayo, kodwa-ke kwaba nephuzu lokugcina ngemuva kwalokho kungenzeka ukuthi kukhona okunye okwenzekile.
Bengigijima lapho ngikhubeka noma kwenzeka okuthile. Ngakho-ke ukuqhubeka okuphelele kunguhlobo lwe-hybrid lokudlule okubili. Uma uhlanganisa lezi ezimbili, njengoba sesibonile, ungazakha zonke lezi zinkathi eziyishumi nambili ezihlukene ngesiNgisi.
Yiziphi izici zeSaturn?
Into: I-Saturn inezici ezintathu;ipela isiphonso endlini yesi-3, indlu yesi-7, nendlu yeshumi ukusuka lapho ihleli khona. Kuyaziwa futhi ukuthi kuyabulala esicini saso noma kuDrishti. Ngakho-ke, ngokubekwa nangokubukeka, inani lezindlu ngaphansi kwesipelingi salo liba lane.13. 2018.
Ngenxa kaSaturn! Ngakho-ke ngifuna ukusebenzisa lokhu ukufundisa abantu ngamandla weSaturn. ISaturn yiplanethi enamandla kakhulu, inamandla amakhulu kune-Jupiter Guru. Ngoba uzokufundisa isifundo sempilo ebunzimeni.
Kuzozuzisa ngemuva kokufunda isifundo uSaturn akunikeza sona. Ngaphandle kweSaturn, wawungeke ubheke impilo nobunzima bayo futhi ufunde izifundo. Ngifuna wonke umuntu afunde lesi sifundo kusuka kuSaturn.
Kungenxa yeSaturn ukuthi ubhekene nobuhlungu obukhulu. Futhi nalapha, impilo ithuthukiswa nguSaturn. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi iSaturn ibukwa kanjani ku-horoscope yakho nokuthi ungazuza kanjani kulolu lwazi lobudlelwano bukaSaturn nawe.
Lapho uSaturn ezokufundisa isifundo esizoba nzima impela futhi ufuna ukwenza okuthile ngakho ukuze ungashayi kanzima. Futhi lokho kuyinto eyodwa. Futhi uma ezonikela ngento enhle kakhulu, uyazi ukuthi ungayithatha.
Akunankinga. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukugcina umkhondo wokuhamba kukaSaturn. Akukhona nje ukuhamba kukaSaturn kusuka kolunye uphawu kuya kolunye, njengoba kuthatha iminyaka emibili nohhafu ukuthi asuke kwesinye isibhakabhaka aye kwesinye.
Kodwa-ke kunezici, izici zeSaturn - 3, 7m, no-10; futhi futhi zinomthelela omkhulu. Futhi nendlu yesishiyagalombili uSaturn kanye noSaturn noSaturn abaneminyaka eyisikhombisa nengxenye. Futhi iSaturn Hora nsuku zonke, owaziyo ukuthi ihlala ihora futhi iza kanye noma kabili ngosuku - konke kubaluleke kakhulu.
Njengomuntu okholelwa ekufundweni kwezinkanyezi njengesayensi, akukho okwenzekayo ngaphandle kokuhamba kukaSaturn. Futhi nguyena onganquma. Nguye futhi olawula impilo, impilo uqobo lwayo inguSaturn.
Ubusa ukuphatha impilo. Impilo izoba ngaphandle uma uSaturn engekho, ngakho-ke kubalulekile ukuthi wonke umuntu afunde okuthile ngeSaturn. Futhi ngizobe ngikhuluma ngoSaturn ezindabeni zami ezizayo.
Uzifunda kanjani izici ku-Vedic astrology?
Ku-Ukufundwa kwezinkanyezi kwamaHindungokohlelo lweParashari anisicikubalwa ngokusayinwa kusayinwe kusayinwe. Amaplanethi awaphothi awaboisicikwizimpawu okungukuthi owesi-2, owesi-6, owesi-8 nowe-12 kusukela kusibonakaliso sabo sokuhlala, kanye namaplanethi atholakala kusibonakaliso esifanayoisicingabanye.
Yini isici samaplanethi ku-Vedic astrology?
Izici zeplanethiukushintshana kwamandla ezindaweni ezikude; isisindo ngasinyeiplanethiikhiqiza futhi ikhiphe inkambu yayo ethile yamandla. Ngezinye izikhathi leziizici zeplanethihola phambiliamaplanethiizihlanganisi.
Kungani nginezici eziningi kangaka eshadini lami lokuzalwa?
Ukuba nokuningi okukhuluizicikukhombisa ukuthi kukhonaeziningiukuxhumana kuishadi,ngakho-keukuthi kunzima kakhulu kuwe ukuveza amandla eplanethi eyodwa ngaphandle kokusebenzisa amandla elinye iplanethi ngasikhathi sinye. Ungumuntu oyinkimbinkimbi, ngamanye amagama. Ukuba nezikwele eziyi-14 kungaphezu kwesilinganiso.
Yini izibonelo zezici?
Incazelo yesici ishoindlela obona ngayo okuthile noma othile, kungaba ngokubuka noma ngengqondo. Igiza elidala elithembekile liyisibonelo sesici esisodwa sokwenzeka kweYellowstone Park. Uhlangothi noma indawo ebheke ohlangothini oluthile. Isici somzimba womzimba.
Kungani sisebenzisa isici?
Njengokupheleleisici,itkungaba njaloesetshenzisiwengezikhathi ezahlukahlukene.Isetshenzisiweukukhombisa lapho okuthile kwenzeka ngaphambi nangemva kwephoyinti elinqunyelwe ngesikhathi noma esinye isenzo, uma ngabe kukhona okwenzekile isikhashana, noma uma okuthile kuguquka noma kwenzeka kaninginingi.
Yisiphi isici seSaturn esinamandla?
Phakathi kwalokhuizici, umhlaka 10isiciyikho okuningienamandla, bese kufika owesi-7, nowesi-3isiciobuthakathaka kunabo bonke.Isici sikaSaturnkuVenus konakalisa impilo yokuhlangana komuntu.10. 2018.
Siyini isici sesithathu seSaturn?
OkwesithathuindluisiciNjengobaOkwesithathuindlu iphathelene nokusebenza kanzima nokuzikhandla,Okwesithathu kukaSaturnindluisicikusuka endaweni yayo kukhombisa ukuthi lapho umuntu edinga ukubeka imizamo nokusebenza kanzima ngokubekezela ukwenza noma yimuphi umthelela maqondana nendlu laphoISaturnibekiwe futhi ngaleyo ndlela ifakiwe.
Yiziphi izinhlobo ezahlukahlukene zezici ekufundweni kwezinkanyezi?
Ekufundweni kwezinkanyezi, kunezici 'ezithambile' (noma ezilula) (izici ezihlanganisayo, ezokuxhumana ngokocansi, i-trine) nezici 'ezinzima' (i-semisextile, isikwele, i-quincunx, okuphambene). Izici Eziyisikhombisa Eziyinhloko: Ukuhlangana (uphawu olufanayo)
Ingabe zikhona izici ezinzima nezithambile ekufundweni kwezinkanyezi?
Ekufundweni kwezinkanyezi, kunezici 'ezithambile' (noma ezilula) (izici ezihlanganisayo, ezokuxhumana ngokocansi, i-trine) nezici 'ezinzima' (i-semisextile, isikwele, i-quincunx, okuphambene). Izici zisebenza kanjani ngesikhathi sangempela?
Yikuphi okubaluleke kakhulu ekufundweni kwezinkanyezi i-orb noma i-angle?
Ngaphezu kwalokho, ama-engeli phakathi kwamaplanethi awafani ncamashi nencazelo ejwayelekile yezici. Ngakho-ke, kufanele kubhekwe ukunemba kwalesi sici, okubizwa ngokuthi 'i-orb' ekufundweni kwezinkanyezi. Uma i-orb iqinile (cishe into eqondile), isici sinamandla amakhulu. Uma amaplanethi exhunywe ngesici esibanzi se-orb, ithonya labo alinamandla kangako.